Guddiga difaaca ee golaha shacabka oo K/Afrika shir kaga qeybgalay | Somali National Television - sntv.so
Home SAWIRO Guddiga difaaca ee golaha shacabka oo K/Afrika shir kaga qeybgalay
Guddiga difaaca ee golaha shacabka oo K/Afrika shir kaga qeybgalay
Wafdi ka socday wasaaradda gaashaandhigga iyo guddiga difaaca ee golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya oo Koofur Afrika howlo shaqo u joogay ayaa la kulmay xubna matala wasaaradaha gaashaandhiga iyo arimaha dibadda ee dalkaas.
Kulanka ayaa waxaa looga hadlayay waxa Soomaaliya ka faa’idi karto khibradaha Koofur Afrika ka baratay gumeysiga iyo waqtiga xoriyadda.
Wafdigaan oo maalmo ku sugnaa Koofur Afrika ayaa waxay booqdeen Wasaaradda Gaanshaadhiga madxafka midib takoorka, halkaas oo ay ku keydsanyihiin taariikhda gumeystihii midab kalasooca, iyagoo dhinaca kale booqday xaafadda Soomaalida ay ka degan tahay Johannseburg iyagoo la kulmay qaar ka mid ah Soomaalida.
Wasiirkii hore wasaaradda gaashaandhiga ahna guddoomiyaha guddiga difaaca, golaha shacabka xildhibaan Xuseen Carab Ciise, ayaa Warbaahinta u sheegay in ay waxyaabo badan oo muhiim ah ka barteen booqashada South Africa.
” Waxyaabaha aan halkaan ka baranay waxay ahayd inaan eegno isku dhafka Ciidamada madaama ay ka soo baxeen midib kalasooca una gudbeen dimoqraadiyad iyo wada shaqeynta caawinaada labada dal iyo inay naga caawin karto hay’adaha aminga iyo dastuurka” ayuu yiri.
Wafdigaan oo ka koobnaa lix xubnood ayaa dib ugu laabtay Soomaaliya,waxeyna qeyb ka ahaayeen Wafuud ka socday Wasaaradaha Gaashaadhiga iyo Barlamaanka Soomaaliya oo dhawaan soo gaaray Koofur Afrika.
Previous articleRa’iisul wasaare ku xigeenka oo ka qayb-galay xil wareejinta Hanti dhowrka qaranka
Next article(Qormo) Ballanqaadka Ra’iisul-wasaaraha iyo shaqo siinta dhallinyarada?